I-Semalt: Ukukhomba Ugaxekile Nokudluliselwa Kwemimoya Ku-Google Analytics
I-Google analytics ingenye yamathuluzi anamandla kakhulu asetshenziselwa ukulandelela, ukuqapha nokubika ithrafikhi yewebhu kusukela ekuqalweni kwayo ngo-2005. Ithuluzi lokuhlaziya liyihloko lezingxoxo ezikhathini zamuva ngemuva kokumangalelwa kokudlulisela amanga Izibalo ze-traffic web. Ukudluliselwa kwe-Ghost kanye nogaxekile ku-Google ukuhlaziya kukhona eminye imisebenzi ethonya kakhulu ebonisa imininingwane yamanga kumqondisi wewebhu.
Esikhathini salesi sihloko, uJack Miller, umphathi Semalt iMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende Ephezulu, unikeza ulwazi olunengqondo mayelana nogaxekile kanye nokudluliswa okufayo okuhlobene nokuhlaselwa kweTrojan, malware kanye ne-virus kumakhompiyutha.
Ukudluliselwa kogaxekile - Ingabe uyazi?
I-Google Analytics ngezinye izikhathi ibonisa izibalo zomgwaqo ezikhathazayo mayelana newebhusayithi. Ngolunye usuku ithrafikhi egeleza kwisayithi iphansi futhi ngokuzumayo ikhuphuka ngaphandle kokuqala okukhulu. Umehluko kokugeleza kwezimoto kwewebhusayithi kushintshwa ngokuphawulekayo kusuka phezulu kuya phezulu kusukela ngosuku oluya kuya kwesinye noma kungakapheli amahora angaze ukwazi ukuthi izivakashi zewebhu zivelaphi. Ukuthunyelwa kogaxekile kungenza ukuthi kube nomgwaqo ongeyena kwiwebhusayithi, ekhombisa okunye ku-Google Analytics. Ngaphandle kwesistimu yokuqapha efanele yokuthola ugaxekile kanye nokudluliswa kweghost, i-malware kanye ne-virus ingahlasela uhlelo. Izivakashi ezikhohlisayo zingakha ithemba elingamanga kumnikazi wesayithi ukuze ziphike inzuzo eningi..
Ugaxekile kanye nerejista yokudlulisela irejista izibalo ezingamanga ku-Google Analytics. Abasebenzisi be-intanethi abangavakashelisi irejista yewebhusayithi njengengqikithi yangempela. I-traffic spam ingadala ukulahlekelwa kwemali kumnikazi wewebhusayithi njengeTrojan, igciwane, ne-malware. Ukuvimbela nokususwa kwe-traffic spam kungenza kube lula izibalo zemoto.
Kukhona izinhlobo ezimbili zogaxekile eziguqula izibalo zangempela zezivakashi kwiwebhusayithi njengoba kubhaliswe ku-Google Analytics. Ugaxekile kungaba ukuhanjiswa kogaxekile noma ukudluliselwa kweghost. Nakuba irejista yokudluliselwa kweghost njengezivakashi zangempela kwiwebhusayithi ngisho nangaphandle kokuvakashela isayithi, ukudluliselwa kogaxekile kwenza ukuzenzekelayo okuzenzakalelayo ngewebhusayithi efaka idatha. Njengoba nje i-malware namagciwane, ugaxekile udinga ukuqedwa ukuze kutholakale ubumnandi kuwebhusayithi.
Thola i-Spam Traffic
Akuzona zonke izixhumanisi ezixhunyaniswe nge-imeyili, iwebhusayithi, kanye nemidiya yezenhlalakahle zinobuhlobo bokuphepha kwekhompyutha. Ukuqhafaza izixhumanisi ezibhekiswe kuzo nezixwayiso eziningi kubalulekile. Izixhumanisi ezabiwe zingalanda i-malware, amagciwane, neThrojani ukuze kubangele ukulimaza ikhompyutha. Ukusebenzisa isofthiwe ye-antivirus kungasiza ukuqapha ukuphepha kwesistimu ngaphambi kokuxhuma kwi-inthanethi.
Ukuthola izixhumanisi zokudluliselwa kogaxekile kuDatha
Imenyu yokudlulisa amehlo ngaphansi kwe-All Traffic esigabeni sokuTholakele esitholakala ku-akhawunti ye-Google Analytics inikeza ukubuka kabanzi kwezivakashi zewebhusayithi. Ukuchofoza kusixhumanisi "esithuthukisiwe" kunika ithuba lokuhlunga amaseshini. Isixhumanisi esisodwa esivakashelayo esivela izikhathi ezingaphezu kweshumi singathonya izibalo zomgwaqo kakhulu futhi zingabangela ukuhanjiswa kogaxekile.